_Ipolisa eNyangeni_. Enye into encinci evela kumdwebi wekhathuni uTom Gauld | Uncwadi lwangoku
_Ipolisa eNyangeni_. Enye into encinci evela kumdwebi wekhathuni uTom Gauld
Ndifundile ubulungisa be amahlaya. Masithi kuba ndivela kwisikolo esidala, ndikhule ndihlekisa kwaye, nanjengomntu omdala, ndakhetha iileta ngakumbi kuneekhathuni. Ndithembekile kuphela kwi-purr yekati emnyama endiyithandayo UJohn blacksad, de UGuarnido noDíaz Canales. Kodwa maxa onke ndijonga ipanorama. Kwaye ngeli hlobo ndifumene le nto incinci, Ipolisa elisenyangeni, ukusuka kumzobi wekhathuni kunye nombhali wesikrini UTom gauld, kwaye iye yandichukumisa.
Ndikunye nabatshana ababini abaqala ukufunda, ndibuyile kwi Iincwadi zabantwana kunye neekomikhi. Ke ngalo lonke ixesha ndisiya kwivenkile ethengisa iincwadi okanye ivenkile enkulu, ndithatha uhambo. Kwaye ngolunye lweentsuku, ndikhuselekile kubushushu obungapheliyo, ndangena kolunye lwazo. Ndimele ndiqaphele ukuba Ndifunda ilizwi Ipolisa kwenye indawo kwaye sele ndinomdla.
Ngoko ke, isihloko yale ncwadi incinci ishelfini yabantwana Yabiza ingqalelo yam. Ndiyithathile ndaqala ukufunda ndade ndayigqiba. Xa iyonke mhlawumbi yimizuzu eli-10 yexesha elityaliwe. Phantse akukho mbhalo ubhaliweyo, kodwa imizobo yakhe ye-monochrome, elula kwaye encinci bayakwazi ukubonisa ngokucacileyo Ukulula kwebali elilula kwaye ngaxeshanye ubunzulu.
1 UTom gauld
2 Ipolisa elisenyangeni
Uzalelwe ngaphakathi Aberdeen Ngo-1976, lo menzi wekhathuni waseScotland kunye nombhali wesikrini wenze into ebalulekileyo kumdlalo weehlaya wangoku. Babo imitya kunye nemifanekiso zipapashwa kwiindawo ezinje Guardian o The New York Times. Uneminye imisebenzi emibini ende.
UGoliyati (2012): Ibali likaDavide noGoliyati ngokwembono yokugqibela.
Wonke umntu uyabamonela ubhaka wam ophaphazelayo (2015): ingqokelela yemicu yakhe yokuhlekisa kwimixholo kunye nabalinganiswa abohlukeneyo abapapashwe kuyo Guardian.
Ngo-Matshi ophelileyo wayeseSpain ukuba abonise eli polisa iimpembelelo zivela emsebenzini UStanley Kubrick okanye Uyilo lwama-60 eGreat Britain.
En Amaphepha ayi-96 Siya enyangeni Apho i Ihlomela-dolophu ukuba kukho amaxesha owazi ngcono kwaye kunjalo ukukhupha kancinci kancinci. Akukho mntu uza kwaye wonke umntu uyahamba. Bleak umbono umlinganiswa ophambili, i ngamapolisa kuphela ohlala nomsebenzi wakhe wemihla ngemihla ka Ukujikeleza kunye nokujonga. Kodwa ezi ziyancipha kwaye zifutshane kwaye iimeko eziza kusonjululwa zimbalwa njengengabalulekanga. A ixhegokazi elahlekelwa yinja, un automaton ukubaleka kwiMyuziyam yeNyanga, okanye a intombazana ibaleka Ukusuka ekhaya.
Ke ngenye imini enye enye apho lUbomi buhamba kancinci ngokungathi bodwa kwaye bubodwa Kwiqhawe lethu, nangona kunjalo, eliqhubeka emazantsi omwonyo. Kodwa akukho nto yayiyiyo. Ngenye yeentsuku abamelwane bakhe bathi ndlela-ntle kuba babuyela eMhlabeni. Omnye, wakhe isithuthi sokujikeleza siyonakala, kodwa azisekho iindawo zokugcina izinto kwaye ezo zithutha zisuka eMhlabeni ziza nolungelelwaniso olwahlukileyo olungasasebenziyo apho.
Ewe ngokunjalo. Intoni ukusilela kukuba ikofu kunye needonathi ekuphela kwendawo eshiyekileyo kwaye uzimase a wobuweyitara unesithukuthezi njengaye. Kude kusilele nayo.
ukuba Musa ukukhohliswa yimigca elula okanye ubungangamsha okanye i-monochrome. Kananjalo ii-vignettes ezingenanto zeetekisi, kuba zichaza njengokuthula kunye nesizungu esijikeleze umlinganiswa ophambili. Yonke into yakha enye Umxube oncomekayo woburharha, uburharha kunye nesigqebelo. Uhleli apho enyangeni kwaye uhlala nayo iimvakalelo ezifanayo nezolo hlobo kwaye wayeka umsebenzi wezomthetho. Siva ukudana kwakhe, ukudana kwakhe kukubona ukuba iphupha lakhe lizaliseka kancinci kancinci liye lajika laba liphupha elibi.
Yo Ndincoma ukujonga. Mhlawumbi ayizukuxelela nantoni na okanye mhlawumbi uyakufumana into, enjengam, ekunika olo chukumiso lokufumanisa. Kodwa ngaphandle kwamathandabuzo ayizukukushiya ungakhathali.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » IiComics » _Ipolisa eNyangeni_. Enye into encinci evela kumdwebi wekhathuni uTom Gauld
Iinoveli ezi-6 zamagama amabhinqa aphumeleleyo